Ungayihambisa njani i-WhatsApp kwi-SD: sebenzisa imemori yangaphandle kwaye ingeyiyo eyakho ephathekayo | Iindaba zeGajethi
Izicelo zokuthumela imiyalezo zilapha ukuhlala kwaye namhlanje ziye zaba sisixhobo esisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi ukuthumela imiyalezo kunye fowuna okanye wenze ividiyo, ubuncinci phakathi kwezicelo ezibonelela ngalo msebenzi, njengoko kunjalo ngeqonga lendlovukazi kwihlabathi leefoni: WhatsApp.
Kuxhomekeka kwisixhobo esisisebenzisayo kwaye kuxhomekeke kuqwalaselo esilwenzileyo, i-smartphone yethu inokugcwalisa ngokukhawuleza, ngakumbi ukuba siyinxalenye yamaqela amakhulu, amaqela apho iividiyo kunye neefoto kwabelwana ngazo ngokubanzi. Ukuba imemori yesixhobo sethu igcwele, sinyanzelekile yisa u-WhatsApp kwi-SD.
Kodwa ayizizo zonke izixhobo ezinolu hlobo lwengxaki, kuba I-Apple iPhones ayinandlela yakukhulisa indawo yokugcina yangaphakathiKe ngoko, ekuphela kwendlela yokukhupha umxholo ohleli kuWhatsApp kukususa isixhobo okanye ukukhupha ngokudibanisa i-iPhone kwikhompyuter ene-iTunes.
Nangona kunjalo, iiterminal ze-Android ungabinangxaki ekwandiseni indawo yokugcina, Kuba zonke iiterminal zisivumela ukuba sandise ngekhadi le-MicroSD, esivumela ukuba sihambise naluphi na uhlobo lwesicelo okanye umxholo ekhadini ukuze sikhulule indawo yangaphakathi yesiphelo, indawo eyimfuneko ekusebenzeni kakuhle.
1 Hambisa i-WhatsApp kwikhadi le-SD
1.1 Ngomphathi wefayile
2 Iingcebiso zokonga indawo kuWhatsApp
2.1 Jonga useto lweWhatsApp
2.3 Rhoqo jonga igalari yezithombe
2.4 Lawula inani lamaqela esirhumele kuwo
Hambisa i-WhatsApp kwikhadi le-SD
Xa ufaka usetyenziso kwi-Android, zifakelwe ngaphakathi kwenkqubo, kwindawo ekungafikelelwa kuyo eyona inomdla, ukuze singaze sikwazi ukufikelela kwiifayile zesicelo, ngaphandle kokuba sinolwazi oluyimfuneko. Ngendlela yendalo, ngalo lonke ixesha sifaka i-WhatsApp kwisiphelo sethu se-Android, incwadi eneenkcukacha ebizwa ngokuba yiWhatsApp yenziwa yolawulo lweengcambu zesiphelo sethu, ifolda apho yonke imixholo efunyenwe kwisiphelo igcinwa.
Kwiminyaka embalwa, i-Android isivumele ukuba sihambise usetyenziso kwikhadi le-SD, ukuze indawo efunekayo ukuze isebenze yile yememori khadi. Ngelishwa, bambalwa kakhulu izicelo ezithi sivumele ukuhambisa idatha kwikhadi le-SD, kunye noWhatsApp ayisiyiyo enye yazo, ke ngoku siza kunyanzelwa ukuba sisebenzise ezinye iindlela ngesandla.
Hambisa yonke ifolda enamagama WhatsApp kwimemori khadi yinkqubo elula kakhulu efuna ulwazi oluncinci kumsebenzisi. Ufuna nje umphathi wefayile, yiya kulawulo lweengcambu zesiphelo sethu, khetha ifolda kuWhatsApp kwaye usike.
Emva koko, kwakhona sisebenzisa umphathi wefayile, siya kwisikhombisi seengcambu zememori khadi kwaye uncamathisele ifolda. Le nkqubo kungathatha ixesha elide, ngokuxhomekeke kwisithuba esi sikhombisi sihleli kuso ngoku kwisixhobo sethu. Iya kuxhomekeka kwisantya sekhadi le-MicroSD esilisebenzisayo.
Nje ukuba inkqubo igqityiwe, wonke umxholo esiwugcinileyo kwifolda kaWhatsApp iya kufumaneka kwimemori khadi, esivumela ukuba sikhulule indawo enkulu kwikhompyuter yethu. Xa siphinda sivula isicelo seWhatsApp, incwadi eneenkcukacha ebizwa ngokuba yiWhatsApp iya kuphinda yenziwe kwingcambu yesixhobo sethu, kuba sisuse kuphela idatha egciniweyo yesicelo, hayi isicelo uqobo.
Oku sinyanzele ukuba siyenze le nkqubo rhoqo, ngakumbi xa i-terminal iqala ukusilumkisa ngokuqhubekayo ukuba indawo yokugcina ingaphantsi kwesiqhelo. Kwiminyaka yakutshanje, abavelisi abaninzi baye basinika umphathi wefayile, ke akukho mfuneko yokuba ubhenele kuGoogle Play ukuze ukwazi ukuhambisa i-WhatsApp kwikhadi le-SD.
Ukuba i-terminal yakho ayinamphathi wefayile, Enye yezona zinto zifumanekayo ngoku kwiGoogle Play Store yi-ES File Explorer, umphathi wefayile esivumela ukuba senze imisebenzi ngeefayile ngendlela elula kwaye ekhawulezayo, nangona ulwazi lwabasebenzisi lilinganiselwe.
Umthuthukisi: I-ES Global
Ukuba asifuni ukukhuphela usetyenziso esingazukulusebenzisa kwikhompyuter yethu, okanye umphathi wefayile obandakanyiwe kwisiphelo sethu unzima ngakumbi kunokuba kubonakala ngathi, sinokuhlala sikhetha ukuhambisa umxholo weWhatsApp kwikhadi le-SD ikhompyutha. Ukwenza njalo, kufuneka sidibanise i-smartphone yethu kwikhompyuter yethu kwaye siyisebenzise Ukuhanjiswa kwefayile ye-Android.
Ukuhanjiswa kwefayile ye-Android sisicelo esenziwa nguGoogle ubeka into esinayo ngendlela Isimahla kwaye esinokuthi ngawo siwudlulise ngokulula umxholo ukusuka kwizixhobo zethu ukuya kwi-smartphone okanye ngokuchaseneyo ngaphandle kwengxaki kunye nesantya esipheleleyo. Nje ukuba sidibanise izixhobo zethu kwi-smartphone, usetyenziso luya kuqala ngokuzenzekelayo. Ukuba ayenzi njalo, kufuneka sicofe i icon ukuyiqhuba.
Isicelo iya kusibonisa umphathi wefayile nayo yonke imixholo ye-smartphone yethu, Umxholo esinokuthi siwunqumle kwaye sizincamathisele zombini kwikhompyuter yethu nakwimemori khadi yesiphelo sethu, apho nesicelo sinokufikelela kuso. Ukuhambisa umxholo weWhatsApp kwikhadi le-SD, kufuneka siye kwifolda ye-WhatsApp kwaye ucofe iqhosha lasekunene kwi-Sika.
Emva koko, siya kwikhadi le-SD, ukusuka kwisicelo ngokwaso nakwikhombisi yengcambu sicofa ekunene kwaye ukhethe Cola. Ukuba le kopi kwaye uncamathisele inzima, sinokuthi ngokulula Tsala ifolda kuWhatsApp kwimemori yangaphakathi yesixhobo ukuya kwikhadi le-SD. Inkqubo ethatha ixesha elingakanani iya kuxhomekeka kwisantya sekhadi kunye nobukhulu besikhombisi. Ukucaciswa kwezixhobo esiqhuba ngazo lo msebenzi azichaphazeli isantya senkqubo.
Iingcebiso zokonga indawo kuWhatsApp
Jonga useto lweWhatsApp
Ngaphambi kokuqhubeka nokuhambisa umxholo weWhatsApp, kufuneka sizame ukuthintela iqela lethu ekugcwaliseni ngokukhawuleza iividiyo kunye neefoto kwakhona. Ukwenza oku, kufuneka siye kukhetho loqwalaselo lweWhatsApp nakwicandelo Ukukhuphela ngokuzenzekelayo imultimedia khetha kwiiVidiyo Akukho.
Ngale ndlela, asizukukwazi ukugcina kuphela kwinqanaba lethu leselula, kodwa siya kuthintela iividiyo, uhlobo lwefayile ehlala kweyona ndawo inkulu, ikhutshelwa ngokuzenzekelayo kwisixhobo sethu nangona singenamdla wokuncinci.
Olunye ukhetho lokubukela iividiyo ezithunyelwa kwelinye lamaqela esikuwo, ngakumbi ukuba zininzi kakhulu ngolu hlobo lwefayile yemultimedia, kukufikelela kwiWhatsApp yeWebhu ngekhompyuter. Xa ungena kuWhatsApp Web, wonke umxholo esiwukhuphelayo kwikhompyuter yethu iya kugcinwa, ke akuyi kuba yimfuneko ukuyikhuphela kwikhompyuter yethu ukuze yongezwe kwezinye iividiyo kwaye indawo yokugcina isixhobo sethu iya kuncipha ngokukhawuleza.
Rhoqo jonga igalari yezithombe
Zombini kwi-iOS nakwi-Android, u-WhatsApp unemiyalelo eyonwabisayo yokungasibuzi ukuba sifuna ukwenza iividiyo kunye neefoto kwisixhobo sethu, kodwa kunokuba sizikhathalele ngokuzenzekelayo, nto leyo ebangela ukuba ngokuhamba kwexesha, indawo yeqela lethu iyancipha. Lo msebenzi usinyanzela ukuba simane sijonga kwakhona igalari yethu ukucima zonke iividiyo kunye neefoto esizifumeneyo ngokusebenzisa isicelo semiyalezo kwaye ziyafumaneka nakwisicelo uqobo.
Ezinye izicelo, ezinje ngeTelegram, zisivumela ukuba siqwalasele usetyenziso ukuze wonke umxholo esiwufumanayo musa ukugcina ngokuthe ngqo kwigalari yethu, esivumela ukuba sigcine kuyo, kuphela iifoto kunye neevidiyo esizifunayo ngokwenene. Ukongeza, isivumela ukuba sikhuphe rhoqo yonke imixholo egcinwe kwindawo yokugcina isicelo, ukunciphisa ubungakanani bayo kwisixhobo sethu.
Lawula inani lamaqela esirhumele kuwo
Amaqela e-WhatsApp yeyona ngxaki iphambili xa isixhobo sethu sigcwaliswe ngokukhawuleza nesiqulatho esongezelelweyo esingasicelanga, ke kusoloko kucetyiswa ukuba ungabi yinxalenye yamaqela apho kuthunyelwa umxholo ongaphezulu kwemultimedia kunemiyalezo ebhaliweyo, ukuba nje kunokwenzeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyisusa kanjani i-WhatsApp kwikhadi le-SD
I-China iqala ngokuhlola icala elikude leNyanga